I-Torso Sex Dolls engasindi iiHips kunye nemilenze iyathengiswa
I-TPE kunye ne-Silicone Sex Dolls Torso Shipping Simahla kulula ukuyicoca
Ukuba awonelanga ndawo yokugcina okanye uhambisa rhoqo oonodoli, imilenze yethu kunye isondo unodoli torso iithoyi zincinci kakhulu, kwaye ukuthenga oonodoli besini kungakunika isisombululo esifanelekileyo. Zilunge kakhulu kumadoda nabasetyhini abanomdla othile, abanomdla kuphela kwicandelo elithile lomzimba wedoli yothando. Khetha enye yezona zilungileyo zonodoli besini, bajongeka njengamadoda okanye abafazi phantse kuzo zonke iinkalo.
*Qaphela: Oonodoli be-Torso abayi kuthatha inxaxheba kuNyaka oMtsha wokuhanjiswa simahla
He Mengsha 48CM TPR SQ-MA20026 Ubungakanani bemveliso 48 * 25 * 17 UR Dolls Torso unodoli
Dale 28CM TPR SQ-MA20012 Torso Doll UR Dolls Ubungakanani bemveliso 28 * 23 * 12
Salome 83CM SD291301 TPR UR Dolls SQ-MA20029 torso unodoli jikelele ulusu
I-Tianna 31CM TPR SQ-MA20032 idoli yeTorso ye-UR yeeDoli zemveliso 31 * 18 * 13
I-Ingrid +Isitokhwe + soKhuseleko lweMathiriyeli iTorso iSini unodoli weMagnetic Ukutshaja uNyango oPhezulu weTPR Material Package Ubungakanani 45.9 * 35.5 * 27.7cm Ukufunxa ukungcangcazela
KwiSitokhwe + UKhuseleko lwaBucala lweKimberly iTorso Idoli yeSini eyakhelwe-ngaphakathi ibhetri(3.7V,700mAh,2.59Wh) Umgangatho oPhezulu weTPR Izinto ezifunxa iVibration Voluptuous Sexy Ffigure Magnetic Charging Package Ubungakanani be41*32.8*24cm
KwiSitokhwe + uSophia oThumela ngokukhawuleza iSex Doll Torso Magnetic Charging High Quality TPR Material Sucking Vibration Yakhelwe-ngaphakathi Ibhetri(3.7V,700mAh,2.59Wh)
Kwi-Stock + i-Xiaomei Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwabasetyhini i-Torso ye-Sex Doll Casting TPR Ubungakanani bepakethi 29*17*14cm
U-Xiaoyou okwisitokhwe se-Torso i-Sex Doll Mold TPR 17CM i-Sexy Dolls for Man Full body Masturbator
Kwisitokhwe + Maiya No.
Kwi-Stock + i-Miya No.1 ethambileyo kwi-Touch Torso ye-Sex Doll Pocket Pussy yaMadoda TPR Ubungakanani bepakethi 55 * 24 * 21cm
KwiSitokhwe + uJessie No.2 Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kweTorso Doll Body Masturbator TPR Ubungakanani bokuPakisha 40 * 29 * 19cm
KwiSitokhwe + Ukhuseleko lwaBucala uDelia Torso Uthando lweDoll yaBadala Intle iDoli yeSini TPR Ubungakanani bePakeji 49 * 29 * 22cm
Kwisitokhwe + iHermosa uKhuseleko lweMathiriyeli eFine Craftsmanship TPR Okwenyani ngokuPheleleyo Amadoda aSexy Love unodoli wokuPakisha ubungakanani 55*24*20.5cm
Kwi-Stokhwe + Ukuthunyelwa kwe-US u-Erika Ogqibeleleyo uMzimba weTorso weSini unodoli we-TPR Umzimba oPlump ngaphandle kokunqongophala kobungakanani bokupakishwa kwe-Skinny 89.5 * 39.5 * 31cm
KwiSitokhwe + Mag Ultimate Ulonwabisayo lweTorso Idoli yeSini Enomtsalane weTPR Ubungakanani bokuPakisha 43 * 26 * 19cm
Kwisitokhwe + iMadison Wild Enjoyment Torso Sex Doll Live Mannequins TPR Ubungakanani bokuPakisha 73 * 44 * 39.5cm
Kwisitokhwe + Akukho Ivumba Elinukayo likaBecky Torso Doll Voluptuous Sexy Figure TPR Ubungakanani bokuPakisha 64 * 33.9 * 27.2cm
KwiSitokhwe + iVera Kulula ukuCoca unodoli weTorso TPR Ubungakanani obunomtsalane boMzimba wokuPakisha ubungakanani 32 * 19 * 15.5cm
KwiSitokhwe + i-Elma yaBucala yokuPakisha i-Torso ye-Sex Doll Package Ubungakanani be-43 * 32.5 * 19.5cm Medical TPR
Kwisitokhwe + uIsabella Carry Torso Doll enomtsalane Silhouette TPR Ubungakanani bokuPakisha 60 * 34 * 25cm
KwiSitokhwe + iMerida Premium Torso Doll Slim Waist Hips TPR Ubungakanani bokuPakisha 41.7 * 25.5 * 18.5cm
KwiSitokhwe + Lorraine Soft Skin Torso Doll TPR Mde Amabele amahle okuPakisha ubungakanani 39 * 22.5 * 16.5cm
Kwisitokhwe + iBrandi Round Breasts Torso Doll Lifelike TPR Deep Cleavage
Kwi-Stock + Dania Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwe-Torso i-Sex Doll ye-Sexy Breasts TPR 67CM Ubungakanani bePhakeji 67 * 51 * 30cm
I-Narada ekwi-Stock Torso Doll Shemale Queen TPR I-Female Fat Buttocks I-Plump Firm iPakisha ubungakanani 61.3*37.2*22.6cm
KwiSitokhwe + UDaniel Ubungakanani obufanelekileyo iTorso Love Doll Small Man Half Body TPR Dark Brown Packing Ubungakanani 59.5 * 41.5 * 25.5cm
Kwisitokhwe + uMelissa oonodoli beSini abaZinzileyo bayathengiswa TPR Butt Buttock Model Packaging Ubungakanani 34 * 27 * 16cm
KwiSitokhwe + uJudy Soft ukuya kuDoli weSini esichukumisayo weTorso Butt Buttocks iModeli yezoNyango eMgangathweni oPhezulu weTPR Material Fat Buttocks Ubungakanani bokupakisha 26.5 * 13 * 14.6cm
UJoyce + UkwiSitokhwe + Othambileyo ukuya kuDoli weSini esichukumisayo weTorso Butt Buttocks iModeli yezoNyango ekumgangatho oPhezulu weTPR Material Fat Buttocks Ubungakanani bokupakishwa 26.5 * 13 * 14.6cm
Kwisitokhwe + iChiQuita yoKhuseleko lwaBucala ngeSini unodoli weTorso Ass kunye nemodeli yehip uMgangatho oPhezulu weTPR Material Live Replica Moment
Izinto zoKhuseleko ze-Ambebe + kwiSitokhwe + i-Torso i-Sex Doll yeThanga Iimpundu zezoNyango ezikumgangatho oPhezulu we-TPR Material Half Body
Kwisitokhwe + iLance Fine Craftsmanship Torso iSex Doll Ithanga Butt Medical Umgangatho oPhezulu weTPR Material Isiqingatha soMzimba oFanelekileyo wamava ePhakeji Ubungakanani 48.4 * 30 * 20cm
KwiSitokhwe + Yu Xianxian Umzimba oGqibeleleyo weTorso Ubungakanani bokuPakisha unodoli 33 * 31.5 * 26cm Umgangatho wezoNyango oPhezulu weTPR Material Butt yethanga
Kwi-Stock + i-Kimberley Ultimate Ultimate Ukuzonwabisa ngesondo unodoli we-Torso Butt Buttock Model Medical Umgangatho oPhezulu we-TPR Material Ukupakisha Ubungakanani be-Wild 41 * 33 * 24cm
Kwisitokhwe + uLindsay Akukho Unodoli weSini onuka Kabuhlungu kunye ne-Ass ye-hip kunye neModeli ye-Hip ekumgangatho ophezulu we-TPR Material ngoko nangoko
Ubomi obufana neDolls Torso yokuCutha ifuthe
Oonodoli bezesondo beTorso bakwabizwa ngokuba ngoonodoli bothando. Zizinto zokudlala zesini ezenziwe ngabantu ezilungiselelwe ukunika ulonwabo lwezesondo kunye nobuqabane. Oonodoli be-torso apha banexabiso eliphakathi, kulula ukugcina, kwaye bakhaphukhaphu xa beshukuma kwaye bedlala. I-torso yabasetyhini kunye nendoda iyafumaneka. Emva koko, ukuba unomdla kuphela emilenzeni yakhe, kutheni uthenge unodoli wesondo opheleleyo we-torso?
Ukusuka kwiigophe zomzimba ukuya kwiingono ezijongeka njengenyani kunye nezitho zangasese, ukubeka inkunkuma elungileyo kwindawo efanelekileyo, zikhangeleka zimangalisa ngendlela emangalisayo. Ubume kunye nokwakheka kwabo kufana nqwa nowasetyhini wokwenene. Ukongeza, ubungakanani babo benza ezi isondo unodoli torso yamadoda kulula ukuyicoca, nokuba kusesinkini, kwishawari, okanye kwenye indawo.
Baneempawu zesini kunye ne-anatomical efanayo oonodoli bezesondo abapheleleyo kwipakethe encinci kunye nexabiso eliphantsi. Aba nodoli baphelele ngokobukhulu kodwa abanazo iindawo ezithile zobuntu bomntu. Banayo yonke imisebenzi yee-shavers zethu ezinobungakanani obugcweleyo, kwaye banamathambo acacileyo angaphakathi, inyama ye-TPE ethambileyo ephezulu kunye ne-elastic, kunye nolunye ukhetho!
Kumadoda afuna ukuphucula amava abo kunye nohlahlo lwabiwo-mali olwaneleyo, i-torso yethu yeyona nto ifanelekileyo yamava anodoli. Ukuba ufuna ukudlala ngoonodoli kwaye awufuni ukuzikhathaza ngawo onke amalungu angaphezulu, ke iiTorsodolls zethu ezimangalisayo sisisombululo esigqibeleleyo! Oonodoli baseJapan kulula ukucoca. Nokuba wenza oku esinkini, kwishawari, okanye kwenye indawo. Inokukunceda ukuba ufumane ulwazi olupheleleyo lobuchwephesha bezinto zokudlala zabantu abadala ngaphandle kokuzigcina nokuzithwala. Ukongeza, ezi zimo kunye ne-textured half-length torso ifanelekile ukugcinwa kwangasese kwaye kulula ukuyiphatha.
Ubahoya njani oonodoli bakho be-Torso?
I-torso yoonodoli bokwabelana ngesondo ingahle ihlelwe ngokweendidi ezimbini ezenziwe ngeTPE kunye neSilicone. Oonodoli be-TPE(thermoplastic elastomers), banogcino oluphezulu kakhulu kodwa banexabiso eliphantsi kwaye bathambile ukubamba. Ngelixa oonodoli besondo be-silicone zomelele ngakumbi kodwa zikwabiza kakhulu. Ke ukuba ungumntu omtsha okanye ucinga ukuthenga unodoli wesini we-TPE, kufuneka ube nomyalelo olungileyo wolwazi malunga nokuba ungabahoya njani. Unodoli we-TPE okhathalelwe kakuhle unokuhlala iminyaka emininzi.
Ukuba awuluqondi olu hlobo lwezinto eziphathekayo, ukugcinwa koonodoli besondo be-TPE kunokuba yingxaki encinci. I-TPE yimpahla ene-porous ngaphezu kwe-silicone kwaye inokugcina umswakama obuninzi kwaye ichaphazeleka ngakumbi kumswakama. Ngaphezu koko, kuba inamaqhuqhuva, awukwazi ukuyivala inzala kuba oko kuya kuyonakalisa. Kodwa ukuba uzimisele ukubeka iinzame ezingakumbi kulondolozo, TPE iidoli ezintandathu inokuphepha amabala kunye nokubumba, kwaye uhlale umtsha ixesha elide.
Kutheni uthenga unodoli wesondo ogqwesileyo?
Ukuba awunayo indawo eninzi ekhaya kodwa ufuna ukonwabela uyolo a unodoli wokwenene, okanye ufuna inguqulelo ekhaphukhaphu yesayizi yabantu abadala thanda unodoli, unodoli we-torso oyindoda unokuba lolona khetho lungcono kuwe. idoli yabasetyhini yesini ziyafikeleleka, kulula ukuzigcina, kwaye zikhaphukhaphu ukuhamba nokudlala ngazo. Ke thenga unodoli we-silicone wesondo obambekayo kubalulekile.
Kutheni uthenge kuthi unodoli wesiqingatha se-torso?
Sinikezela ngokhetho oluhle kakhulu olufikelelekayo kunye nomgangatho ophezulu wobomi obuyinyani be-sex doll torso. Kutheni sinezivumelwano ezinkulu kunye namaxabiso? Injongo yethu kukufumana oyena unodoli ubalaseleyo ukuze wenze amaphupha akho abe yinyaniso, kwaye ukuze wenze oko, sibambisene nabavelisi abaphezulu e-China ukukuzisela eyona modeli ilungileyo, amaxabiso kunye nokhetho olulungeleyo. Nokuba ujonge kwi-TPE, isilicone, unodoli wesondo we-torso ophantsi okanye oonodoli bezesondo bokwenyani, silukhetho lwakho olungcono.
I-torso kanodoli wesondo yenzelwe abafazi kunye namadoda, kwaye kukho amalungu amaninzi omzimba wendoda nebhinqa. Njengoko imfuno isanda, abavelisi baqala ukuza nemibono emitsha, ukusetyenziswa tpe unodoli wesini somzimba iimolds eziyinyani, kwaye zivelise ngakumbi nangakumbi nangakumbi imizimba yoonodoli besini esitsha. Ngoko ke, nokuba uyindoda okanye ungumfazi, uya kufumana into oyithandayo. Ukuba uthanda amabele amakhulu, ngoko uthenge a Umzimba weBBW, okanye idonki, umthondo, njl. idoli encinci yesondo umlenze ukunandipha isondo somlenze.